You are here: Home somal Horyaalkii heerka 1aad 2013 ka ee Kubadda Cagta oo ka furmay Muqdisho.(+sawiro)
Wasaaradda Horumarinta Adeegga Bulshada iyo shaqsiyaad magac ku leh Isboortiga dalkeena.
Ugu horeyn Xogyaha guud ee XSKC C/qani Saciid Carab ayaa ka warbixiyay dadaalkii dheeraa ee uu Xiriirka u galay Taaba-gelinta bilicsamidda garoonka iyo horumarinta Ciyaaraha heerka koowaad wuxuu xusay in Horyaalka sanadkan uu qaadan doono magaca “Nationlink Championship 2013”, wuxuuna aad ugu mahadceliyay Shirkadda Isgaarsiinta Nationlink oo qeyb weyn ka qaadanaysa taabagelinta Horyaalkan.
Agaasinka guud Wasaaradda Horumarinta Adeegga Bulshada Aweys Sheekh Xadaad ayaa dhinaciisa muujiyay sida ay wasaaraddiisu ugu qanacsan yahiin howlaha baaxadda leh ay qabteen XSKC wuxuu ka dhawaajiyay inay madaxda xiriirka istaahilaan bilad dahab lagu maamuusayo howlaha taariikhiga ah ee ay ku horumariyeen K/Cagta Soomaaliya.
Guddoomiyaha XSKC Cali Saciid Guuleed oo ku dhawaaqay in Horyaalku furan yahay ayaa kula dardaarmay kooxaha ka qeybagalaya inay muujiyaan ciyaar wanaag iyo asluub wuxuu tilmaamay in Xiriirkiisu mar walba u taagan yahay sidii ay uga shaqeyn lahaayeen horumarinta Ciyaaraha Kubadda si ay ula jaan-qaado tan Caalamka.
Ciyaartii ugu horeysay ee Wareegga 1aad waxaa isaga horyimid kooxaha Heegan iyo Gadiidka, Dardar xoogan oo ay ku bilowday Heegan ayaa waxaa daqiiqadii 14aad gool u xaqiijiyay ciyaaryahan Maxamed Cabdi Xaayoow, iyadoo daqiiqadii 25aad madaxa uu raaciyay Axmed Cusmaan C/lle (Axmadeey Weji), Intaas ka dib kooxda Gadiidka ayaa qeybtii labaad farsamo la timid. iyadoo weeraryahankooda C/laahi Axmed Maxamed uu xaqiijiyay labo gool daqiiqadiihii 50` iyo 70` sidaasna barbar-dhaca niyadda ugu dhisay kooxdiisa – Balse Cusmaan Yuusuf Cusmaan (Aayarta) ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay 82` wuxuu dhaliyay goolkii guusha sidaasna 3-2 ugu quusiyay kooxdii Gadiidka.
Waxaa ciyaartan xiisaha lahayd garsoorayay Xamsa Xaaji Cabdi, Kaaliye 1aad Saalax Cumar Abuukar, Kaaliye 2aad C/raxmaan Cabdi Cumar (Shuuriye), Sarkaalka 4aad Aweys Sheekh Cabdullaahi, iyadoo xeer Ilaaliyahana uu ahaa Cabdi Cabdulle Basaale.
Daawashada ciyaartan ayaa waxaa ka soo qeybgalay mas`uuliyiin kala duwan – waxayna ku soo idlaatay jawi qurux badan.